My Life asaDoctor ဆရာဝန်ဘဝ စာမျက်နှာ: In the bag ခါးပိုက်ထဲက ရုန်းထွက်ကြ
• ခေတ်လူငယ် လူရွယ်တွေကို စာဖတ်စေချင်လို့ စေတနာနဲ့ ရေးကြ၊ ပြောကြတာတွေ မနည်းပါ။ အဲဒီအထဲမှာ ကျွန်တော်လဲ ပါတယ်။
• ကျွန်တော်က အသက်ကြီးသူမို့ ခေတ်မဆန်ပေမဲ့ ခေတ်အမှန်ကို သိပါတယ်။
• လွန်ခဲ့တဲ့ ၄-၅ နှစ်လောက်ကစပြီး၊ လူငယ်တွေ ‘အင်တာနက်’ ပေါ် ရောက်လာကြတယ်။
• ဒိအရင်ကတော့ စာအုပ်အငှားဖတ်တာ အတော်ခေတ်စားခဲ့တယ်။ ‘စာအုပ်အငှားဆိုင် ယဉ်ကျေးမှု’ လို့ ပြောရမဲ့ ခေတ်တိုလေး ရှိခဲ့သေးတယ်။
• ဒိနောက်တော့ ‘ကိုရီးယားရုပ်ရှင်’ ထဲ နစ်မျောကြပြန်တယ်။ နစ်မွန်းတယ်လို့အထိပြောရင် စိတ်မဆိုးကြပါနဲ့။
• 'အင်တာနက်' ခေတ်ထဲမှာ ခုနောက်ဆုံးက ‘စမတ်ဖုန်း’။ သီချင်းနားတောင်တဲ့ နားကြပ်တပ်မထားရင် ‘အင်္ဂါမစုံတဲ့သူ’ လို ဖြစ်လာတယ်။ အချိန်ရသမျှ ‘ဖေ့စ်ဘွတ်’ ကိုသာ ပွတ်ဆွဲနေကြတယ်။
• ‘ဖေ့စ်ဘွတ်’ မှာ ဘာပါသလဲ။ ထူးပြောစရာမလိုပါ။ ဆိုရှယ်ကျစရာတွေကသာ အုပ်စီးထားတယ်။
• ကျွန်တော်တော့ ‘အုတ်ခဲတချပ်’ လောက်သာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါစေဆိုပြီး၊ အသိတိုးစရာလေးတွေ ရေးတင်နေပါတယ်။ ကျန်းမာရေးလဲရေးတယ်။
• လူတိုင်းက ကျန်းမာရေးမကောင်းကြတာ သိသာတယ်။ ရုပ်ရော စိတ်ကျန်းမာရေးမှာပါ။ ဆေးကုရတာမပြောနဲ့ ဆေးစစ်ရတာလဲ ငွေကုန်ကြေးကျ များလွန်းလှတယ်လို့ ညည်းညူသံတွေ အိပ်ယာထကနေ အိပ်ခါနီးအထိ (အခုစာရေးပြီးမှာ အိပ်မှာပါ) ဖတ်နေရတယ်။
• လူငယ်-လူရွယ်တွေ စာဖတ်ချင်အောင် အခြေအနေတွေက မပေးပါ။ မဖတ်နိုင်ကြပါ။ မဖတ်ချင်တော့ပါ။ ဒီကြားထဲ ‘ဖတ်ချင်ပါတယ်ဆရာ စာအုပ်ဈေးက ခေါင်ခိုက်နေတယ်’ လို့ ကနေ့ဘဲ တယောက်က ရေးလာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ စာတွေမဖတ်ကြတော့ပါ။
• စာဖတ်သင့်တဲ့ ‘အချိန်ကွက်’ ကို ‘အင်တာနက်’ က အာဏာသိမ်းထားလိုက်ပြီ။ လူတွေဟာ ‘ဗာကျူရယ်’ ဆိုတာ ဖြစ်လာနေပြီ။ အစစ်မဟုတ်တာတွေကို အစစ်လို မြင်-ကြား၊ ခံစားနေကြပြီ။ သူတို့တွေးတာလဲ အတုတွေ၊ သူတို့ ရချင်တာလဲ အစစ်မဟုတ်။ သူတို့လုပ်မှာတွေကလဲ ‘အတုမစစ်တွေ’ ဖြစ်နေတော့တယ်။
• ဝေဒနာတွေကိုတော့ အဲလို အတုတွေနဲ့ ကုစားလို့မရပါ။ ရောဂါပျောက်ဘို့ ‘ဆခရင်’ ပေါ်က ဒေါ်လာပုံတွေ ပေးလို့မရပါ။
• အိပ်မက်ဘဝက နိုးထကြပါ။ အစစ်တွေကို သိအောင်လုပ်ပါ။ အစစ်ကိုချစ်ကြပါ။ အစစ်ကိုသာရှာပြီး အစစ်နဲ့သာ ကုစားပါ။
• ‘မီဒီယာ’ လွတ်လပ်လာတာကို လက်တွေ့အသုံးချကြပါ။ စာအုပ်ကောင်းတွေ ပြန်ထုတ်နေပြီဆိုတဲ့ မင်္ဂလာသတင်း ကြားရတယ်။ စာဖတ်ကြပါ။ စာကောင်းတွေဖတ်ပြီး လူကောင်းတွေဖြစ်လာကြပါ။
• ခေတ်ကို ‘ခါးစောင်းတင်’ နိုင်အောင် ကြိုးစားကြပါလော့။
• ‘ခါးပိုက်’ ထဲက ‘အိတ်ထဲက’ ထွက်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြပါတော့။
1. In the bag (Idiom)
Intoxicated John is in the bag and means as hell. အဆိပ်သင့်ထားတဲ့ ‘ဂျွန်’ အိတ်ထဲရောက်နေတယ်ဆိုတာ ငရဲကျနေသလိုဘဲ။
2. If something is in the bag, you are certain to get it or to achieve it အိပ်ထဲရောက်နေပြီဆိုတာ အပိုင်ရတော့မယ့်သဘောဘဲ။ Nobody knows who'll get the job, despite rumors that Smith has it in the bag. အလုပ်ကိုဘယ်သူရမလဲတော့ မသိဘူးကွ၊ ‘စမစ်’ အိတ်ထဲတော့ ရောက်နေတယ်။
3. Safe or certain ရေရာသေချာတယ်။
When the score reached 12 to2we knew the game was in the bag. ၁၂ မှတ်ကနေ ၂ အထိရောက်ကတည်းက ဒီပွဲက ဒို့အိတ်ထဲရောက်ပြီဆိုတာ တွက်ပြီးသား။
Posted by Dr. Tint Swe at 12:45 AM